nandresy ny fiaraha-mientana! | Hevitra MPANOHARIANA
Na aiza na aiza mandresy hatrany ny fiaraha-mientana indrindra rehefa rariny ho an'ny be sy ny maro no arovana. Tsy hay tohaina ny herim-bahoaka!
Vao niharan'izany indrindra ny fitondrana frantsay notarihin'i Villepin. Atao hoe firenana demokratika ry zareo. Ny fototra famoahana ny lalàna moa dia amin'ny alalan'ny antenimiera ihany. Nandalo izany tokoa ny volavolan-dalàna momba ny Emploi Première Embauche. Nolanian'ny maro an'isa ny volavolan-dalàna. Tsy nanaiky ny sendika ary dia nirotsaka an-dalam-be. Ny mpianatra tena niharany koa tsy nanaiky mora izany fanapahan-kevitra momba ny asany izany.
Hitan'ny fanjakana fa somary sahirana izy ka dia nampandalovina tany amin'ny filan-kevitra momba ny lalam-panorenana ilay volavolan-dalàna vao nolaniana. Neken'ny tao ihany koa. nanohy ny fihetsehany ny mpitolona. Ny nahavariana dia tsy mba niteny ny mpitondra hoe 3 tapitrisa fotsiny no nidina an-dalam-be tamin'ny mponina 55 tapitrisa. Ny malagasy manko no malaza amin'izay zavatra izay. Hitan'ny fitondrana frantsay fa tsy ho tafita ilay izy, nefa dia mbola nampiharin'ny filoha ihany satria nihevitra ry zareo fa hihena ny mpidina an-dalam-be rehefa mihitra ny lalàna. Inona akory no teo? Tsy nihena ny hetsika ary nanatena ny hitomboany ary ny sendika sy ny mpianatra nitokona...nisy ny fihoaram-pefy isan-karazany. Fanafoanana ny laàna ihany no takiany.
Farany nilefitra ihany ny fitondrana, ahato (na foanana) ny lalana efa nametrahana didy fampiharana. Hosoloina vaovao izany. Tsy dia fantatro loatra ny amin'io.
Lesona ho antsika malagasy kosa aloha io. Ny antsika tsy hety hihetsika raha tsy hoe hanongana, na resaka politika hatrany. Ny an'ny olona raha vao fantany fa hampidi-doza dia avy izy amin'ny angady sy ny harona. Ny antsika indray efa an-tenda ny rano vao hikorapaka. Fahapotehana hatrany no vokany. Ny olona kosa tany Frantsa tsy nitaky hoe miala i Chirac fa ny lalàna nivoaka ihany no notoheriny. Sahala amin'ny adala aho niresaka momba io delestazy mitady haverina io, ny vidin-jiro anefa akarina ihany. Tsy fanonganana no tadiavina raha mitaky hoe hajao fotsiny izahay tsy ho faty jiro fa miankina amin'io ny asanay, izany hoe ny ainay.
Am-bava homana, am-po mieritra!